Iifowuni - Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi (Iphepha 2)
I-EMUI 10.1 iBeta yeHlabathi: Iitheminali ezihlaziya kunye nendlela yokwenza oko
I-Huawei isondele ekumiseleni i-beta yolungelelwaniso lwayo lwe-Android, nantsi siza kuxela ukuba zeziphi iiterminal ezihambelana nendlela yokufumana.
IPhone SE 2020 entsha isemthethweni kwaye ezi ziimpawu zayo
Yenziwe ukuba ilinde ngenxa yengxaki yamanye amazwe ngenxa yecoronavirus, kodwa sele sinayo apha, i-iPhone "engabizi kakhulu" ifikile.
Hlonipha 30, Hlonipha 30 Pro kwaye Hlonipha 30 Pro +: iinkcukacha, ixabiso kunye nokufumaneka
Inkampani yaseAsia i-Honor isandula ukubonakalisa ukuzibophelela kwayo kwisiphelo esiphakamileyo kwihlabathi leefoni. Imbeko ...
I-OnePlus 8 kunye ne-OnePlus 8 Pro: iinkcukacha, amaxabiso kunye nokufumaneka
Entsha i-OnePlus 8 kunye ne-8 Pro sele zisemthethweni. Kule nqaku sikuxelela zonke iinkcukacha, ukubakho kunye nexabiso lale nto intsha yokubheja ye-OnePlus yoluhlu oluphezulu
Ihlangana njani i-Skype ngoku, eyona ndlela ifanelekileyo yokuSondeza iifowuni zevidiyo
Ukusukela oko kwaqala ukusetyenziswa amashumi amane eminyaka, ukusetyenziswa kweefowuni zeefowuni kuye kwanda kwaye ziye zaba zezona ...
Le yiXiaomi Mi 10 Pro kunye nazo zonke iimveliso ezintsha zohlobo
Inkcazo esemthethweni yayo yonke into entsha eziswa nguXiaomi kule Semester yokuqala ye-2020, ngokungathandabuzekiyo ibalaselisa iflegi entsha yohlobo.
Thelekisa phakathi kweHuawei P40 kunye ne-Samsung Galaxy S20
Kule nqaku sithelekisa zonke iiterminal eziyinxalenye yoluhlu lwe-S20 ye-Samsung kunye noluhlu lwe-P40 lweHuawei
Thumela ngokulula izabelo kutitshala wakho ngeNotebloc
Enkosi kwisicelo seNotebloc, sinokuthumela umsebenzi wethu ngokukhawuleza nangokulula kutitshala, kule mizuzu xa iimeko zinqunyanyisiwe.
IXiaomi Redmi Qaphela i-9s ngoku isemthethweni: amaxabiso kunye neenkcukacha
Ukuba ufuna ukwazi onke amanqaku kunye neenkcukacha esizibonelelwa yiRedmi Qaphela 9s, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
Ungayiphucula njani intsebenzo yemidlalo kwi-Android
Apha sichaza indlela yokuphucula ukusebenza kweemidlalo kwisixhobo sethu se-Android ngendlela elula nekhawulezayo.
Thelekisa: I-Samsung Galaxy S20 VS Huawei P30 Pro
Fumanisa ukuba yintoni umahluko phakathi kweHuawei P30 Pro kunye ne-Samsung Galaxy S20 entsha yokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi engcono ekuthengeni.
I-Huawei Mate Xs kunye nazo zonke iindaba ze-brand ye-2020
Isizukulwana sesibini se-smartphone sikaHuawei esongwayo sinikezelwe ngokusesikweni kwaye kwiActualidad Gadget siyivivile.
I-Realme iyasothusa kwakhona ngeRealme X50 Pro 5G entsha
I-Realme X50 Pro 5G kukuzibophelela kweRealme ephezulu yokunxibelelana ngomnxeba, indawo yokugcina enentsebenzo ephezulu kwintengiso.
I-Xperia 1 II kunye ne-Xperia 10 II kukuzibophelela kukaSony kwindawo ephezulu kunye naphakathi
AbakwaSony bachaze ngokusemthethweni ukuzibophelela kwabo okutsha kwihlabathi leefoni, uluhlu olunezitishi ezimbini: i-Xperia 1 II kunye ne-Xperia 10 II
I-Samsung Galaxy Note 10 Lite ngoku iyafumaneka eSpain: amaxabiso, iinkcukacha kunye nokuthelekisa lonke uluhlu
Inkampani yaseKorea ithiwe thaca ngoFebruwari 11, uluhlu olutsha lwe-S ngo-2020, uluhlu olubhaptiziweyo njengeGlasi ...
Entsha iXiaomi Mi 10: ebalaseleyo phantse kuyo yonke into ngaphandle kwexabiso
Uluhlu olutsha lweXiaomi Mi 10, sele lusemthethweni kwaye lusinika izinto ezintle, ezibandakanya ukunyuka kwamaxabiso
Yiyiphi i-Samsung Galaxy S20 yokuthenga. Sithelekisa iimodeli ezintathu
Kuyinyani ukuqeshwa kwayo ngonyaka ngoFebruwari, inkampani yaseKorea iSamsung iazise ngokusesikweni ukubheja kwayo ...
IGalaxy S20 yibhetri entsha yeSamsung kwisiphelo esiphakamileyo
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga noluhlu olutsha lweGPS S20 inokufumaneka kweli nqaku.
IGlass Z Flip: yonke into ofuna ukuyifumana malunga nefowuni entsha enokusonga ye-Samsung
Ukubheja okutsha kweSamsung kwii-smartphones ezisongekileyo kuthiwa yiGlass Z Flip, i-clamshell ye-clamshell ye-smartphone eneenkcukacha eziphezulu.
Uyibona njani indawo apho sithathe ifoto kunye nefowuni yethu
Ukubona indawo yeefoto esizithathayo kunye ne-smartphone yethu, nokuba yi-Android okanye i-iOS, yinkqubo elula kakhulu ukuba sinenkcukacha kweli nqaku.
Uyenza kanjani indawo yogcino epheleleyo yefowuni yakho
Esinye sezifundo ekufuneka zifunwa ezikolweni, ngakumbi ngoku apho uninzi ...
Thelekisa: IHuawei P30 Pro VS Realme X2 Pro
Sibeka i-Huawei P30 Pro kunye ne-Realme X2 Pro ubuso ngobuso xa kuthelekiswa okokugqibela nevidiyo efakiweyo, yeyiphi i-smartphone engcono?
Ungayitshintsha njani iROM kwaye ubhalise iwaranti ye-OnePlus ethengiweyo e-China
Apha sichaza inyathelo ngenyathelo ukuba ungayibhalisa njani i-terminal yakho kunye nenye iwebhusayithi ukuze ube nesiqinisekiso esisemthethweni kwaye utshintshe iROM yaseburhulumenteni yaseYurophu.
I-Apple ibhalisa ilungelo lomenzi wechiza lesazisi kwiscreen
UApple ubhalisile patent yomhla wokudibanisa i-ID yescreen kwiscreen kwaye angahlala kunye ne-ID yobuso kwi-iPhone elandelayo
Ungabandisa njani ubomi bebhetri kwi-smartphone yakho
Ngamaxesha okuqhubela phambili okumangalisayo kwishishini le-smartphone ebelingenakucingwa kwithuba elifutshane elidlulileyo, ibhetri iyaqhubeka ...
Ulandela njani uthotho lwethu oluthandayo kunye neemovie ezivela kwi-smartphone yethu
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, xa i-Emule yayiyeyona ndlela iphambili yokonwabela naluphi na uhlobo lomxholo, nokuba luluhlu ...
Ungasenza njani isicelo sokubuyiselwa imali yesicelo okanye umdlalo kwiVenkile yokudlala nakwiVenkile ye App
Ngexesha le-90s kunye nee-2000s zakuqala, ubuqhetseba yayingumyalelo wosuku, hayi kuba ...
Uyifumana njani imigqomo yokusebenzisa kwakhona kwi-Android
Ukuba uhlala ufuna ukonwabela umgqomo wokuphinda usebenzise i-Android, enkosi kwesi sicelo kunokwenzeka, isicelo
Yazi iziphumo zoNyulo Jikelele lweSpain 10N 2019 kwi-smartphone okanye ithebhulethi yakho
Izikhululo zokuvota zisandula ukuvulwa kulo lonke elaseSpain okwesibini kulo nyaka, masibone ukuba ngaba lixesha lesibini ...
Uyenza njani i-WhatsApp yakho ikhuseleke ngakumbi kwaye uyikhusele ekubiweni
Ukuba awufuni mntu uza kukwazi ukufikelela kwiakhawunti yakho ye-WhatsApp, kuya kufuneka ulandele amanyathelo alula kakhulu esikubonisa kuwo eli nqaku.
Ividiyo elula ngokulula isibonisa ukuba yeyiphi na ibhokisi yokuqala yokwenyani yeHuawei Mate X entsha
Isizukulwana sesine sohlu lwePixel sikaGoogle sityhilwe ngokusemthethweni. Eyona nto intsha inoveli ifumaneka ekusebenziseni isenzo.
IHuawei Nova 5T: amaxabiso, iinkcukacha kunye nokufumaneka kwesiphelo esitsha seHuawei
Isiphelo esitsha esivela kwinkampani yaseAsia iHuawei ukukhuphisana phakathi kuluhlu lubizwa ngokuba yiNqaku 5T kwaye lisinika ixabiso elinomdla kakhulu kwimali.
I-Yuka, isicelo esiselfowuni esivumela ukuba sihlalutye ukutya kunye nezinto zokuthambisa
Enkosi ngesicelo seYuka, sinako ukuhlalutya ngokukhawuleza umgangatho weemveliso esinazo ekhaya okanye sizimisele ukuthenga
Ungazifaka njani izicelo kwi-iPhone ngaphandle kweVenkile yeApple eneAltStore
Ukuba ufuna ukwazi enye indlela esinayo yokufaka usetyenziso kwi-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch yakho, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
I-Huawei Mate 30 ngaphandle kweGoogle zokusebenza: Yonke into ekufuneka uyazi
Fumanisa ukuba yintoni inyani yokuba iHuawei Mate 30 ifikelela kwintengiso ngaphandle kwezicelo zikaGoogle kwaye yintoni enokwenziwa kule meko.
I-Huawei Mate 30 kunye ne-Mate 30 Pro: Isiphelo esiphakamileyo sihlaziyiwe
Fumanisa iinkcukacha ezipheleleyo zeHuawei Mate 30 kunye neMate 30 Pro, isiphelo esitsha sophawu lwaseTshayina esele lubonisiwe eMunich.
Uyifaka njani i-iOS 13 okanye i-iPadOS kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad
Siza kukubonisa onke amanyathelo oza kuwalandela ukuze ukwazi ukuhlaziya ngaphandle kweengxaki kwi-iOS 13, inguqulelo entsha ye-iOS ekhoyo ngoku.
I-Huawei P30 Pro isungula ngemibala emibini emitsha kunye ne-Android 10
Fumanisa imibala emibini emitsha yeHuawei P30 Pro ethiwe thaca ngokusemthethweni e-IFA 2019 eBerlin kwaye kungekudala iza kufika kwintengiso.
I-LG G8X ThinQ: Isiphelo esitsha sophawu
Fumanisa konke malunga ne-LG G8X ThinQ, ifowuni entsha kraca ephezulu ethiwe thaca ngokusemthethweni kwi-IFA 2019.
I-LG iveza uluhlu lwayo olutsha lwaphakathi kwi-IFA 2019
Fumanisa konke malunga ne-LG K40s kunye nee-K50s, iifowuni eziphakathi eziphakathi zohlobo lweKorea uphawu oluthiwe thaca ngokusemthethweni kwi-IFA 2019.
Isamsung iqinisekisa umhla wokumiliselwa kweGold Fold
Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokuphehlelelwa ngokusesikweni kwe-Samsung Galaxy Fold esele ibhengeziwe yinkampani uqobo.
Hlonipha ama-20s kunye neNhlonipho Dlala i-3: Uluhlu oluphakathi lwebhrendi
Fumanisa yonke into malunga ne-Honor 20s kunye ne-Honor Play 3, iifowuni ezintsha phakathi kuluhlu oluphakathi lwegama laseTshayina esele lisesikweni.
Sijonga onke amagama eedessert asetyenziswe yi-Android ukuza kuthi ga ngoku ukubiza iinguqulelo ezahlukeneyo ze-Android ebisungulwa kwimarike.
Kwi-Xiaomi abafuni kulinda ixesha elide ukusukela xa beveza imveliso bade bayivule kwihlabathi liphela. IXiaomi Mi 9T Pro ifika eSpain
I-EMUI 10 yenziwe ngokusemthethweni: Zonke iindaba
Fumanisa zonke iindaba ze-EMUI 10, inguqulelo entsha yomaleko owenziwe ngokwezifiso weHuawei esele inikezelwe ngokusemthethweni.
Uyilungisa njani ibug kwi-Android ekhupha ibhetri yakho
Fumana indlela yokusombulula le mpazamo echaphazela abanye abasebenzisi be-Android kunye nebhetri yeefowuni eziphathwayo.
IGalaxy Note 10 vs Galaxy Note 10+: Bahluke njani
Fumanisa onke umahluko phakathi kweGlass Qaphela 10 kunye neNqaku 10+, esele zibhengezwe ngokusemthethweni kumsitho eNew York.
I-Black Shark 2 Pro: Eyona nto inamandla kwimidlalo ye-Xiaomi
Fumana konke malunga ne-Black Shark 2 Pro, i-Xiaomi's yokudlala i-smartphone entsha eye yasungulwa e-China kwaye iza eSpain kungekudala.
Izicelo zokuphepha iikhamera zesantya
Ukuba ufuna ukuba iihambo zakho zingabinangxaki epokothweni yakho, siya kukubonisa ukuba zeziphi ezona zicelo zibalaseleyo zokufumana iiradar
IGolden Fold iya kuphehlelela ngoSeptemba, yiyo yonke into etshintshileyo
Fumanisa lonke utshintsho olwenziwe yi-Samsung kwiGolden Fold ukuze ikulungele ukwaziswa ngoSeptemba njengoko babhengezile.
Ukuba udiniwe kukufumana iifowuni ezivela kwiinombolo zefowuni ongazaziyo, enkosi kwezi zicelo uya kuba nakho ukubazi ukuba babe nokukhetha ukuthatha umnxeba.
Uhlalutyo lwe-headphone ye-Energy Sistem ye-4
I-Urban 4 yi-Energy Sistem, uyilo oluhle lwemibala, itekhnoloji yakutshanje ukusinika esona sandi siphezulu, ukuzimela okuhle kunye nobunzima obukhaphukhaphu.
Uyifaka njani i-beta ye-iOS 13 kwi-iPhone kunye ne-iPad kwiWindows nakwiMac
Ukuba ukhuthazwe ukuba ufake i-beta yokuqala ye-iOS 13, kweli nqaku siza kukubonisa ukuba ungayenza njani zombini kwiWindows nakwiMac.
I-Realme 3 Pro ifumaneka ngoJuni ngexabiso elifanelekileyo
Ukusukela nge-5 kaJuni, iRealme 3 Pro izakufika eSpain, itheminali enezinto ezintle kakhulu ngexabiso elingaphezulu kohlengahlengiso.
UGoogle ushiya iHuawei ngaphandle kwe-Android, kodwa ngokufikelela kwiVenkile yokudlala okwangoku
Isigqibo sikarhulumente waseMelika sokubandakanya uHuawei kuluhlu lwabamnyama sele sinesiphumo sokuqala: ayizukusebenzisa iGoogle kaGoogle.
IBlack Shark 2 ifika eSpain, ngukumkani omtsha wokudlala
IHuawei P30, ukubonakala kokuqala kwesiphelo esitsha sophawu
Fumanisa ngakumbi ngeHuawei P30, isiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina, kunye nokuvela okokuqala kusishiya kule meko.
IHuawei ibeka uluhlu lweHuawei P30 ngokusemthethweni
Fumanisa konke malunga nodidi oluphezulu lweHuawei, olwenziwe yiHuawei P30, P30 Pro kunye neP30 Lite, esele ihanjisiwe ngokusemthethweni.
Ungayisusa njani intsholongwane kwi-Android
Fumanisa zonke iindlela zokususa intsholongwane kwi-Android. Ukusuka ekubuyiseleni, ukususa ii -apps ukusebenzisa imo ekhuselekileyo kwifowuni.
I-Huawei isungula i-Huawei Y7 2019, i-smartphone yazo zonke iipokotho ezine-AI
Umnyango woluhlu lokungena kukaHuawei ngowama-2019 yiHuawei Y7 2019, itheminali enexabiso eliphezulu kakhulu.
Ungavala njani izicelo ezivuliweyo kwi-Android
Ukuvala usetyenziso kwi-Android yinkqubo ethi ngamanye amaxesha iphantse inyanzeleke ukuba i-smartphone yethu isebenze ngokufanelekileyo.
I-Sony Xperia 1: Isiphelo esitsha sikaSony ngoku sisemthethweni
Fumanisa ngakumbi ngeSony Xperia 1, isiphelo esitsha esitsha sikaSony esithe sanikezelwa ngokusemthethweni kwi-MWC 2019 e-Barcelona.
Sibeka ii-smartphones ezimbini ezisongelayo kwimarike ubuso ngobuso, i-Samsung Galaxy Fold kunye neHuawei Mate X, ezifanayo kakhulu kwaye kwangaxeshanye zahlukile
I-Xiaomi iqala ngentsasa ye-MWC nge-Mi9 yayo entsha kunye neMi Mix 3 5G
I-Xiaomi iveza isixhobo sayo esitsha kunye nesokuqala ngetekhnoloji ye-5G kwi-MWC e-Barcelona, ​​iXiaomi Mi Mix 3 5G entsha.
I-Samsung Galaxy S10 +: ixabiso, amanqaku kunye nokufumaneka
Ukubhiyozela isikhumbuzo se-XNUMXth soluhlu lwe-S's, inkampani yaseKorea yonyuse inani lezixhobo ...
I-Samsung Galaxy S10e: amaxabiso, amanqaku kunye nokufumaneka
Uluhlu lweGPS S ngoku lusemthethweni. Kodwa ngeli xesha kwaye ngokungafaniyo neminye iminyaka, inkampani yaseKorea ...
I-Samsung Galaxy S10: amaxabiso, amanqaku kunye nokufumaneka
I-Galaxy S10 yindlalifa yendalo kwi-Galaxy S9. Kulo nyaka, ngokungafaniyo nohlelo lwangaphambili, umahluko ophambili ...
Thelekisa phakathi kweGPS S10 kunye ne-iPhone XS
Ukuba uyathandabuza malunga nokuthenga i-Galaxy S10 okanye i-iPhone XS, kweli nqaku siza kukukhupha ngaphandle kwamathandabuzo ngokukhawuleza.
Thelekisa phakathi kweGPS S10, S10 + kunye ne-S10e
Emva kweeveki ezininzi zamarhe, kwaye njengoko bekucwangcisiwe, inkampani yaseKorea i-Samsung isungule ngokusesikweni uluhlu olutsha ...
I-Xiaomi Mi 9, i-Xiaomi Mi 9 SE kunye ne-Xiaomi Mi 9 uhlelo olucacileyo: iinkcukacha, ixabiso kunye nokufumaneka
Uluhlu lweXiaomi Mi 9 sele lusemthethweni. Kule nqaku sikubonisa yonke into ekufuneka uyazi malunga nolu luhlu lutsha luvela kumenzi waseAsia uXiaomi
Ividiyo yokuqala ihluziwe ngokubonakala kweGPS S10 kunye ne-S10 +
Kwiintsuku ezimbini ngaphambi kokunikezelwa ngokusesikweni koluhlu lweGPS S10, uphononongo lwevidiyo lukhutshiwe apho sinokubona khona ii-terminals ngokweenkcukacha.
Ukucaciswa kwe-LG V40 ThinQ, efumaneka ngoFebruwari 4
Isiphelo sesiphelo esitsha se-LG, i-V40 ThinQ iya kufumaneka eSpain ukusuka ngoFebruwari 4. Ngelixa sikuxelela zonke iinkcukacha zayo.
Landela esi sikhokelo ukukhetha ngokuchanekileyo iselfowuni yakho entsha
Ngaba uceba ukutshintsha iselfowuni yakho? Landela eli nqaku lesikhokelo ngenqaku kwaye ungaphoswa naziphi na iinkcukacha ukukhetha ngokufanelekileyo iselfowuni yakho elandelayo.
I-Xiaomi kunye neMovistar bajoyina imikhosi yokuthengisa iRedmi 6 64GB kuphela
Ukuba awukacaci malunga nokuba yeyiphi kwaye yeyiphi i-smartwatch, kweli nqaku siza kuchaza yonke into enxulumene nezi zixhobo.
Uyisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwikhompyuter yakho
I-WhatsApp iyeyona ndawo iqhagamshelwa kunxibelelwano isetyenziswa kakhulu kwihlabathi, kokubini kulunge kwaye ...
Ungayifumana njani imifanekiso esusiweyo kwifowuni
Fumanisa iindlela apho sinokufumana kwakhona iifoto esizicime ngempazamo kwiselfowuni yethu, nokuba yi-Android okanye i-iPhone.
IOS 12: yintoni entsha, izixhobo ezihambelanayo, indlela yokufaka kunye nokunye okuninzi
Inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza ka-Apple ye-iPhone ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa. Kule nqaku sikubonisa yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-iOS 12
Fumana umdaniso wasimahla kwi-Fortnite ngokukhusela iakhawunti yakho
Kwiinyanga ezidlulileyo, umdlalo weenkwenkwezi kuwo onke amaqonga yiFortnite, umdlalo osisiseko sempumelelo yawo ekufumanekeni kokukhutshelwa Abafana beMidlalo ye-Epic basinika umdaniso omtsha womlingiswa wethu eFortnite ukuba siqhubeka nokwenza la manyathelo mabini ungqinisiso ukukhusela iakhawunti yethu
Itekhnoloji yakhe wonke umntu: olu luluhlu olutsha lwee-smartphones zeWiko
Kwiminyaka yakutshanje, sibonile ukuba ixabiso lee-smartphones lenyuke njani ukugqitha ...
Le yitshaja entsha engenazingcingo yeTesla yee-smartphones
Inkampani yeTesla, apho uElon Musk lelona nani lifanelekileyo, kwaye ngamanye amaxesha elinempikiswano, iyazinikezela ...
UXiaomi uhamba nophawu lwakhe olutsha lwePocophone F1 kwaye ugqabhuke kwimarike ngenxa yexabiso layo
Kwaye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sabona ukufika kwemodeli entsha ebizwa ngokuba yiPocophone F1, uphawu lweXiaomi oluthi ...
Ukusukela uGoogle wangena ngokupheleleyo kwintengiso yefowuni ephathekayo ngeGoogle Pixel, inkampani iye yanda ngokuthe ngcembe inani lamazwe Ukuba ungomnye wabasebenzisi abalinde ukubona uyilo lwesizukulwana sesithathu seGoogle Pixel XL elandelayo, sibonisa Imifanekiso yokuqala yesiphelo, iinyanga ezimbini phambi kokunikezelwa kwayo.
Kwaye apha sinenye i-Xiaomi smartphone entsha elungele ukuthatha iimodeli zokugqibela. Entsha…
I-Gmail ye-Android sele isivumele ukuba sirhoxise ukuthunyelwa kwee-imeyile
Ngokuqinisekileyo kuye kwenzeka ngaphezu komnye kuni ukuba ngaphambi kokufunda i-imeyile ukukhangela ukuba ibhalwe ngokuchanekileyo na kwaye ibonise konke nangona ilibazisekile, kwaye emva kokufumaneka kwi-Android, i-Gmail ye-Android ekugqibeleni iyasivumela ukuba siyirhoxise ukuthumela ii-imeyile esele zithunyelwe
IXiaomi Redmi 6 kunye neRedmi 6A bafika ngokusemthethweni eSpain ukusuka kwi- € 119
Ukwandiswa kweXiaomi kuyaqhubeka kwilizwe lethu kwaye oku kuguqulela kwizixhobo ezitsha eziqala ukuthengiswa ...
Ukucaciswa kobuso ngobuso kwi-Samsung Galaxy Note 9 kunye ne-Galaxy Note 8
Ngaphandle kwamathandabuzo xa isixhobo esitsha esineempawu ze-Samsung Galaxy Note 9 sisungulwa, baninzi abasebenzisi ...
I-Samsung Galaxy Qaphela 9 vs iPhone X vs Huawei P20 Pro
Kwiiyure ezimbalwa, iflegi entsha yenkampani yaseKorea i-Samsung sele isemthethweni. Inqaku le-Galaxy 9 ...
I-Samsung Galaxy Note 9 sele isemthethweni, sikubonisa iinkcukacha
Emva kweenyanga ezininzi ngamarhe, namhlanje nge-9 ka-Agasti inkampani yaseKorea ivakalise ngokusesikweni i-terminal entsha yoluhlu lweNqaku, i-terminal ene-Ukuba uphosa umboniso, emva koko sikubonisa zonke iinkcukacha ze-Samsung Galaxy Note 9.
Isamsung yazisa ngokusemthethweni iGlass Note 9 eNew York [Ngqo]
Kwiiveki ezimbalwa emva kwamarhe kunye nokuvuza kuqale malunga nemodeli entsha ye-Samsung yenyanga ye ...
Ungayifumana njani iakhawunti yeWhatsApp emisiweyo
Iqonga lokuthumela imiyalezo kuWhatsApp libe yeyona ndlela iphambili yokunxibelelana nezigidi zabasebenzisi. Ngaphandle kweziphene esinazo Ukuba siyibonile indlela i-akhawunti yethu ye-WhatsApp evaliwe ngayo, nangasiphi na isizathu, kweli nqaku sikubonisa ukuba singayifumana njani ngokulula
Kule nyanga ungathenga iXiaomi Mi 8 ngokusemthethweni eSpain
Elinye inyathelo likaXiaomi lokunyusa ukuthengiswa kwezixhobo zalo kwilizwe lethu kwaye ...
I-Fortnite ye-Android inokukhetha kuphela kwi-Samsung kwiintsuku zokuqala eziyi-120
Ngaphezulwana nje kwiveki ephelileyo, savuma into yeendaba isithi umdlalo wefashoni iFornite, engekafumaneki kwi-Android, Ngokwengcaciso entsha, ububodwa beFortnite ngeSamsung bunokufikelela kwiintsuku ezili-120 ngaphezulu, esele Ukuphela kwexesha leentsuku ezingama-30 zeNqaku 9, iya kwandiswa ukuya kuluhlu lweSamsung S.
Eli liphepha lobuchwephesha le-Samsung Galaxy Note 9
Ngaphantsi kweveki phambi kokuba le modeli intsha yakwa-Samsung ithiwe thaca ngokusemthethweni, amanqaku kunye neenkcukacha ...
Ifowuni yakho, usetyenziso lokufikelela kwiMicrosoft iOS okanye i-Android terminal malunga nokufika kwintengiso
Kwinkomfa yokugqibela yabaphuhlisi bakaMicrosoft, inkampani yabhengeza, ukongeza kwiindaba ezahlukeneyo ezijolise ikakhulu kweli qela, ...
UGoogle umisela imithetho emitsha ukuze inotshi ingangeni kwi-ecosystem yayo
Kunyaka ophelileyo, xa inkampani esekwe kwiNtaba yeNtaba ibhengeza ngokusesikweni iimodeli ezintsha zePixel, yahlekisa ngenotshi eyenze entsha Ngokutsho kweGoogle, izikhokelo ezitsha zokwamkela inani kunye nendawo yenotshi kwiscreen kula matyala alandelayo.
IHuawei idlula iApple kwaye iba ngumenzi wesibini othengisa ezona smartphones ehlabathini lonke
Inkampani yaseAsia iHuawei, isandula ukukhupha iziphumo zezemali kwikota yesibini yalo nyaka, ...
I-Fortnite ye-Android iya kuba yodwa kwi-Galaxy Note 9 ngenyanga yokuqala
Uninzi lwabasebenzisi be-Android abalinde njengamanzi ngoMeyi, ukumiliselwa kwenguqulo ye-Android ye-Fortnite, umdlalo wefashoni, ngokutsho kwemithombo eyahlukeneyo, i-Fortnite inokufika ngokukodwa kwi-Galaxy Note 9 ngomhla wentetho yayo, ngo-Agasti olandelayo 9, ekhethekileyo eya kuhlala inyanga.
Oku kukucaciswa kunye namaxabiso eXiaomi Mi A2 kunye neMi A2 Lite
Iiyure ezimbalwa emva kokuba iXiaomi Mi A2 entsha ibe semthethweni kwaye xa ingaphaya kwama-24 ...
IXiaomi Mi A2 iyafumaneka ukuthengisa iiyure ezingama-24 ngaphambi kokunikezelwa kwayo
Namhlanje isizukulwana sesibini seXiaomi Mi A1, iMi A2, isiphelo sendlela ekulindeleke ukuba sibekho, ngenxa yempumelelo eboniswe ngumanduleli wayo, kwiiyure ezingama-24 ngaphambi kokunikezelwa kwayo eluntwini, iXiaomi Mi A2 kunye neLite version yayo sele zinikezelwe ngokusemthethweni. Ukuthengwa ngeGearbest
I-WhatsApp iya kulinciphisa inani lamaxesha emiyalezo enokuthunyelwa phambili
Ngokuqinisekileyo sonke sifumene umyalezo othunyelwe ngamanye amaxesha nge-WhatsApp malunga nento yeendaba, isithembiso esilahlekisayo okanye umkhonyovu. Emva kwemini o Iqonga lemiyalezo liyalawula kwihlabathi lisandula ukubhengeza utshintsho kwinani lamaxesha apho siya kuba nakho ukuthumela imiyalezo
Imifanekiso, ixabiso kunye nemibala ye-Samsung Galaxy Note 9
Apha ngezantsi sikubonisa lonke ulwazi esilwaziyo namhlanje malunga ne-Samsung Galaxy Note 9, isiphelo sendlela esiza kuboniswa nge-9 ka-Agasti
INokia iyaqhubeka nokwenza into yayo kwaye iNokia 3.1 ngoku iyafumaneka eSpain
Ifemi eqhubeka nokwanda kwayo kwilizwe lethu isungula isixhobo esinye ngeveki ngokukuko. Kwiveki ephelileyo ...
Ngoku ewe, ngoku hayi ... i-Samsung Galaxy S10 inokongeza inzwa yeminwe phantsi kwesikrini
Ngoku kubonakala ngathi iimodeli ezintsha zenkampani yaseMzantsi Korea ziya kongeza inzwa yeminwe phantsi kwe ...
INokia 8110 Reloaded ifika eSpain ngexabiso lama-euro angama-79
Sikulo mzuzu apho iNokia ingasothusi kuthi ngokusungulwa kwezixhobo "ezindala" kodwa kule ...
Nge-10 kaJulayi ebomvu izakufika kwi-OnePlus 6
I-smartphone yenkampani yaseTshayina i-OnePlus yongeza kumbala obomvu kwaye koku basivumele sabona isibini ...
IHuawei Y5: 2018, amanqaku kunye nexabiso lokungena kweHuawei
Isiphelo sendlela uHuawei abheje ngayo kulo nyaka, iHuawei Y5, sele ikhona eSpain ngee-euro ezingama-119.
I-LG V40 iya kuba neekhamera ezintlanu zizonke
I-LG V40 iya kufika ineekhamera ezintlanu zizonke. Fumana okuninzi malunga nesiphelo esitsha esivela kwi-LG esithembisa ukuba yeyona nto ibalaseleyo kwicandelo lokufota.
IGreen Note 9 iboniswe nge-9 ka-Agasti
Inkampani yaseKorea i-Samsung sele iqalile ukuthumela izimemo kumaphepha-ndaba malunga nomsitho oza kubamba ukubonisa i-Galaxy Note 9
Isamsung yenza usuku olungasetyenziswanga ngokusemthethweni kwiGlass Note 9
Kwaye kukuba kwiintsuku ezininzi ngoku ukusondela komsitho "ongapakiswanga" kwimodeli entsha kuye kwavakala ...
I-Pixel 3 kaGoogle kunye nePixel 3 XL ivela kwakhona kumnatha [kwimifanekiso]
Sisondele kakhulu ekuboneni ukuba yeyiphi imodeli yesithathu yeGoogle Pixel kunye nePixel XL, ezinye izixhobo ...
Uyifaka njani i-iOS 12 kwi-iPhone okanye kwi-iPad ngoku sele ifumaneka esidlangalaleni
Kwiiveki ezintathu emva kokukhutshwa kwe-beta yokuqala yonjiniyela we-iOS 12, u-Apple wenze nje i-beta yokuqala ka-12 yoluntu ukuba ifumaneke kubasebenzisi.
I-Huawei P20 Pro ebizwa ngokuba yi "Best Smartphone ye-2018" yi-European Hardware Association
Kule meko liwonga elinikezwe yi-European Hardware Association, apho sinokufumana kwakhona ...
IGTV, esi sisicelo esitsha se-Instagram sokukhuphisana neYouTube
I-Instagram ifuna ukukhuphisana ne-YouTube. Kwaye iyakwenza njalo ngeqonga layo elitsha elime nkqo elibizwa ngokuba yi-IGTV. Okanye yintoni efanayo: I-Instagram TV
Esi sisikrini se-Samsung Galaxy Note 9
Kuncinci okuseleyo kuthi ukuba sibone ngokusesikweni imodeli entsha ye-Samsung Galaxy Note 9 kwaye ukuvuza kusenzeka yonke imihla….
I-Huawei Mate 10 kunye ne-Mate 10 Pro ziya kongeza ukuvula ubuso
IHuawei iyaqhubeka nokuzisa obona buchwephesha kwizixhobo zayo kwaye kule meko sinokufika kwayo yonke into ...
I-OPPO Fumana i-X, le iya kuba yi "smartphone" evulwa yinkampani eSpain
I-OPPO Fumana i-X yindawo yokugqibela yenkampani yaseTshayina eya kwenza umhlaba wophawu eSpain. Owona mntu uphambili? Ikhamera yakho yangaphambili
Uyilo lukaGoogle Pixel 3 XL luyavuza ngenxa yomenzi wecala
Ayisiyo eyokuqala kwaye ayizukuba lixesha lokugqibela ukuba i-smartphone ivuziswe ngokuthe ngqo ngenxa ...
I-LG X5, ilungu elitsha lodidi lokufaka kunye nebhetri enkulu
I-LG X5 yindawo ekungena kuyo i-smartphone enebhetri ekufuneka ikubambe, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ukuya kuthi ga kwiintsuku ezimbini
I-Galaxy Note 9 iya kufika kwintengiso nge-512 GB yokugcina
Amarhe amva nje acacisa ukuba i-Samsung inokumisela uhlelo olukhethekileyo lwe-Galaxy Note 9 ukuya kuthi ga kwi-512 GB yokugcina kwangaphakathi.
I-OxygenOS 5.1.6 irhoxisiwe ngenxa yengozi kwi-OnePlus 6
Ukuba kukho inkampani ezimisele malunga nokuhlaziywa kwenkqubo, yi-OnePlus. I…
Isamsung yatyhila iGlass Qaphela 9 kunye neGear S4 kunye ekuqaleni kuka-Agasti
Amarhe amva nje malunga nomhla wokubonisa we-Galaxy Qaphela 9 acebisa ukuba izakuba ekuqaleni kuka-Agasti kwaye iza kuza neGear S4
Le yimibala ye-Samsung Galaxy Note 9
Kulo nyaka sibona amarhe abalulekileyo kunye nokuvuza malunga nemodeli entsha yenkampani yaseMzantsi Korea kwaye ...
IXiaomi Redmi S2 ifika eSpain, eyona nto ihamba phambili kwiiselfies
UXiaomi uyaqhubeka nezibhengezo zakhe kwaye kwimizuzu embalwa edlulileyo upapashe ukumiliselwa kweXiomi Redmi S2 eSpain. Ngaphandle…
I-LG Q Stylus yenye ye-LG kwiGlass Note
Ukusukela ekufikeni kwayo kwintengiso, i-Samsung Galaxy Note ibe sisalathiso kwintengiso ye ...
Ungazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla
Ngaba iselfowuni yam isimahla? Sikufundisa ukuba uyazi ngokukhawuleza ukuba i-smartphone yethu isimahla, okanye ibotshelelwe kumqhubi wayo, yinto ethatha isigqibo xa kufikwa ekubeni sikwazi ukuyisebenzisa nabanye abasebenzisi okanye ukuba sizimisele ukuyithengisa.
Uyifaka njani i-iOS 12 kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad
I-beta yokuqala ye-iOS 12 ngoku iyafumaneka ukuze abaphuhlisi baqale ukulungelelanisa usetyenziso lwabo kuhlobo olutsha lwe-iOS. Sikubonisa ukuba uyifaka njani kwizixhobo zakho.
UGoogle angavula iPixel yohlahlo-lwabiwo mali
Ngokwamahemuhemu amva nje, isigebenga sokukhangela siza kusebenza kwiPixel engabizi mali ukuxhasa umnikelo waso phakathi kuluhlu, kunye nesiphelo esilawulwa yiQualcomm's Snapdragon 700.
I-Galaxy A9 Star: Ngaba i-Samsung ikopishe iinxalenye ze-iPhone X?
Ukucoca uyilo lwenkanyezi entsha ye-Samsung Galaxy A9.Fumana okuninzi malunga nefowuni entsha evela kwinkampani yaseKorea abathi ibango liphefumlelwe uyilo lwe-iPhone X.
I-Android Oreo ifikelela kwi-LG G6 kwilizwe lethu
Ngenye imini sithethe ngesibhengezo seNokia okanye endaweni yoko iHMD Global, malunga nohlaziyo lwe-Android ...
Xiaomi Mi 8: amanqaku, iinguqulelo kunye nazo zonke iinkcukacha
IXiaomi Mi 8 sisiphelo esitsha senkampani yaseTshayina. Kolu sapho sifumana ukongeza kwinguqulelo yoqobo iXiaomi Mi 8 SE kunye neXiaomi Mi 8 Explorer Edition. Sikunika zonke iinkcukacha.
I-WhatsApp iyeka ukubonisa umxholo wemiyalezo emva kokuhlaziya i-iPhone kwi-iOS 11.4
Uhlaziyo lwamva nje lwe-iOS 11.4 ye-iPhone, lwenza ukungqubana kunye neWhatsApp kunye nezaziso zeWhatsApp ziyeke ukubonisa umthumeli kunye nomxholo, okanye umthumeli kuphela.
Xiaomi Mi 8: nge «Notch», i-ID yobuso, ubukrelekrele bokufakelwa kunye neenguqulelo ezintathu ezahlukeneyo
I-Xiaomi ivelise iflegi yayo entsha: Xiaomi Mi 8. Nangona kungothusa bonke abakhoyo, kuya kubakho iinguqulelo ezintathu ezikhoyo. Imodeli yoqobo idityaniswe neXiaomi Mi 8 SE kunye neXiaomi Mi 8 Explorer Edition
I-HMD Global ibhengeza ukufika kwe-Android P kuyo yonke iNokia
Kubonakala ngathi abanye abavelisi bawuthatha ngokungxamisekileyo umba wokuhlaziya izixhobo zabo kwiinguqulelo zamva nje ezikhoyo ...
Ngoku kwintengiso ye-HTC Desire 12+ ye-249 euro
Inkampani yaseTaiwan i-HTC ibeke nje uluhlu lwayo oluphakathi lwe-2018 kwintengiso eSpain, i-HTC Desire 12+ nge-euro ezingama-249 kuphela.
Ukuhanjiswa kweMotorola Moto Z3 Play kuvuza
Uthotho lonikezelo lweMotorola Moto z3 Play entsha iyahluzwa emva kokuba ifikile ...
IXiaomi Mi 8, iinkcukacha ezithe kratya ziyavela ngaphambi kokumiliselwa kwayo
Ngomhla we-31 kaMeyi 2018, i-Xiaomi Mi 8 entsha, eyona nto iphambili kwinkampani yaseAsia, ithiwe thaca. Idatha entsha iye yavuza: imibala eyahlukeneyo; Iskena sobuso se3D kunye neAnimojis
I-Lenovo izakuveza i-Lenovo Z5 yayo entsha ngoJuni 5
Inkampani sele ithumele izimemo kumsitho olindelweyo apho imodeli elandelayo ye ...
IVivo Y83 yifowuni esekwe kwi-Android esisixhobo sokuqala ukudibanisa iprosesa yeMediaTek Helio P12 22 nm
UAndy Rubin uyayiphika into yokuba kubalulekile ukuba kuthengiswe, nangona yena engazi ukuba yintoni ikamva lakhe
Ngokuka-Bloomberg, u-Andy Rubin, owayesakuba ngu-Google kunye nomsunguli we-Essential, unokuyibeka inkampani kwintengiso emva kwamanani amabi. Nangona kunjalo, umseki sele eyizolile imimoya yabasebenzi bakhe
I-Samsung Galaxy J8, iselfowuni efikelela kwii-intshi ezi-6 kunye nekhamera esemva kabini
Isamsung i-Samsung J8 siselfowuni enkulu evela kwisigebenga saseAsia esiya kuthengiswa ngoJulayi eIndiya. Inesikrini esine-intshi ezi-6 kunye neelensi ezimbini kwikhamera yayo ephambili
Olunye uhlobo olungcono kwi-Instapaper, ngoku sele iyekile ukusebenza eYurophu
Nje ukuba uvale inkonzo ukuze ugcine iiwebhsayithi oza kuzifunda emva kwe-Instapaper, kweli nqaku sikubonisa uthotho lwezinto ezizezinye ezingasasebenziyo.
I-LG Q7 iza kufika eSpain ngoJuni nge-349 euros
Sele siwazi umhla kunye nexabiso le-LG Q7 entsha, indawo enomdla kakhulu ekumgangatho ophakathi efuna ukoyisa ngeempawu zayo.
Uyisusa kanjani i-WhatsApp kwikhadi le-SD
Ngaba ufuna ukuhambisa i-WhatsApp kwi-SD yeselfowuni yakho? Sifundisa indlela yokuthintela i-WhatsApp ekuthatheni indawo kwimemori yakho yeselfowuni kunye nokusebenzisa ikhadi langaphandle endaweni yoko.
Le yi-HTC entsha ye-smartphone, iHTC U12 +
Kungabonakala ngathi i-HTC ilahlekile kwimakethi esebenzayo ngokusisigxina xa kuziwa ekungeniseni izixhobo ezitsha, kodwa ...
I-HMD Global ifumana i-100 yezigidi zeedola ukuqhubeka nokukhula
I-HMD Global, engumnini weefowuni zakwaNokia, ibhengeze izolo ingqokelela ye ...
I-Instagram iyakusivumela ukuba sithule iakhawunti zabantu esingafuni ukulandela
Kusenokwenzeka ukuba ngeTwitter yakho, kuFacebook, ku-Instagram, kuYouTube okanye nakweyiphi na enye iakhawunti, uya kuzibona ...
I-Alcatel 3, 3C, 3L, 3V kunye ne-3X sele ikhona eSpain
Apha ngezantsi sikubonisa zonke iinkcukacha kunye nexabiso loluhlu olutsha lweAlcatel 3, 3C, 3L, 3V kunye ne3X kulo nyaka.
IXiaomi Mi 8 iya kuba nenzwa yeminwe phantsi kwesikrini
Isiphelo sokuqala esivela kwinkampani yeXiaomi esineenzwa zeminwe phantsi kwesikrini iya kuba yiXiaomi Mi 8, isiphelo sendlela esinokuthi sikubone ukukhanya kwemini ngoMeyi 31.
I-Instagram iyakusazisa ukuba sisebenzisa ixesha elingakanani usetyenziso
I-Instagram ivavanya umsebenzi omtsha oya kusenza sazi ukuba sisebenzisa ixesha elingakanani usetyenziso kwi-smartphone yethu.
Zonke iinkcukacha ze-HTC U12 + ziintsuku ezihluziweyo ngaphambi kokubonisa
Njengesiqhelo phakathi kwabavelisi be-Android, kwiintsuku ezimbini phambi kokunikezelwa ngokusesikweni kwe-HTC U12 +, zonke iinkcukacha zesiphelo sendlela zicociwe.
I-Fortnite ye-Android iyeza kweli hlobo
Okwangoku ukumiliselwa kwe-Fortnite ye-Android kuya kufuneka ilinde iinyanga ezimbalwa, ngokweMidlalo ye-Epic kwiwebhusayithi yayo.
I-OnePlus 6 kuvavanywa ngokugqithileyo. Uvavanyo lokuchasana
Kube lixesha elide okoko sayeka ukubukela ividiyo malunga novavanyo lokuchasana nesixhobo ...
UXiaomi ubhengeza ukufika kweXiaomi Redmi Qaphela 5 kunye neMi MIX 2S eSpain
Ngaphambi kokuqaliswa kweemodeli ezimbini ezibalulekileyo kwiXiaomi kwaye yile Xiaomi Redmi Qaphela 5 kunye neXiaomi ...
Ungaluvimba njani umnxeba kwiWhatsApp
Sikubonisa indlela yokuthintela umnxibelelwano kuWhatsApp we-iOS okanye i-Android. Ukuba umntu uyakucaphukisa kwaye ufuna ukumthulisa, landela isifundo sethu. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba uvaliwe kuWhatsApp? Unokufumana neengcebiso zethu.
Isamsung i-Samsung iqala i-S9 kunye ne-S9 Plus kwi-Burgundy Red kunye ne-Sunrise Gold
Inkampani yaseMzantsi Korea isandula ukwazisa imibala emibini emitsha kuluhlu lwezixhobo zayo i-Samsung Galaxy S9 kunye ne-Galaxy S9 ...
Imbeko 10: imibala engaphezulu, uyilo olufanayo kunye nexabiso eliphantsi kuneHuawei P20
IHuawei inengxaki ekhayeni layo kwaye le yiHlonipho, eselulo uphawu lwe ...
Le yi-Lenovo ye-smartphone elandelayo ene-screen sonke ngaphambili
I-Lenovo ihluziwe ngomongameli wayo, unikezelo lwento eyakuba yeyokuqala kwiscreen sonke kwimarike, nenqanaba lescreen se-85%
I-OnePlus 6: imifanekiso, amaxabiso kunye neenkcukacha
Kwiintsuku ezimbini ngaphambi kokuboniswa kwe-OnePlus 6T, iAmazon iAmazon ikhuphe konke okuya kuba lixabiso lesiphelo kunye nemifanekiso yokuqala esemthethweni yesiphelo kunye neenkcazo zayo.
I-2,4 yezigidi zee-smartphones ezithengiswe yiXiaomi eYurophu ngexesha le-Q1 2018
Alithandabuzeki elokuba uXiaomi wangena kwilizwekazi elidala lomelele kwaye oku kuboniswa ngokwamkelwa okuhle ...
Inkqubo entsha yeSteam ikhonkco iya kukuvumela ukuba udlale imidlalo kwiselfowuni yakho okanye kwi-iPhone
Ivelufa ibhengeze ukuba kwiintsuku ezimbalwa kuya kubakho usetyenziso lwasimahla kuzo zombini i-iPhone kunye ne-Android eya kukuvumela ukuba udlale izihloko zeqonga ngokusebenzisa iselfowuni
Iindaba eziphambili ze-Android P Beta 2
Ngexesha lokubhiyozela i-I / O kaGoogle, inkomfa yabaphuhlisi bakaGoogle, abafana baseMountain View bane ...
I-Wiko View2: i-intshi ye-6 ine-19: 9 ifomathi yee-euro ezingama-199 kuphela
Ukuba ubuceba ukuvuselela i-terminal yakho kungekudala, kuya kufuneka uthathele ingqalelo i-Wiko terminal entsha, i-View2, itheminali enomgangatho wexabiso elihle kakhulu.
I-malware entsha echaphazela i-Android ibizwa ngokuba yiZookPark kwaye iyintlola kuyo yonke into esiyenzayo
I-malware entsha neyingozi yeZooPark iguqukile kule minyaka idlulileyo ukuba ibe sisixhobo esiyingozi ekujongwe ukuba sijongwe phakathi kwamazwe.
Le patent isibonisa indlela ekulindeleke ngayo ukuba i-Samsung Galaxy X isebenze
Ukungena apho siza kuthetha ngemifanekiso emitsha enxulunyaniswa nelungelo elilodwa lomenzi esivumela ukuba sibonise ukuba ingaba yintoni i-Samsung Galaxy X, isixhobo esisongelayo, esikwixa elizayo.
I-HTC ibhengeza ukusungulwa kwe-HTC U12 nge-iPhone 6 yeeNxalenye
Ngomhla we-23 kaMeyi, inkampani yaseTaiwan iya kuthi ngokusesikweni ithi thaca iflegi yayo elandelayo ebizwa ngokuba yi-HTC U12 okanye i-U12 + njengoko ibizwa njalo.
I-iPhone X yayiyeyona fowuni ithengiswa kakhulu kwikota yokuqala kwi-2018
I-iPhone X yayiyeyona fowuni ithengiswa kakhulu kwikota yokuqala. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso yefowuni ka-Apple kwiinyanga ezintathu zokuqala zalo nyaka.
I-Wiko Jerry 3, uluhlu lokungena kunye ne-Android Oreo kunye nexabiso elingaphantsi kwe-100 euro
Inkampani yaseFrance iWiko isungule isixhobo esitsha senqanaba lokungena: Wiko Jerry 3, i-smartphone eneempawu ezinomdla kunye nexabiso elihlengahlengisiweyo
Thelekisa ezona khamera zibalaseleyo ze-smartphone kwintengiso: iHuawei P20, i-iPhone X kunye ne-Samsung Galaxy S9 +
Isiphelo esiphakamileyo kwihlabathi lefoni yefoni ihlala ikhokelwa yiApple kunye neSamsung, ...
IHuawei isungula uluhlu lwayo olutsha lwe-2018 Y: iifowuni ezimbini ezineselfowuni ngokusebenza kakuhle kunye nexabiso elihlengahlengisiweyo
Kubonakala ngathi iHuawei ayinakuthi cwaka okomzuzwana kwaye ibhengeze nje ukumiliselwa kwechungechunge lwayo olutsha ...
I-LG G7 ThinQ, iflegi ekwabheja kwiNotshi eyaziwayo
I-LG G7 ThinQ sisiphelo esiphakamileyo salo nyaka u-2018 ukuba ukubheja kuyilo olungenasiphene; ukubheja kakhulu kwiArtificial Intelligence kunye nesandi sePremiyamu
IHuawei inokuba iphuhlisa eyayo inkqubo yokusebenza
Inkampani yaseAsia iHuawei isebenza kwinkqubo yayo njengenye ye-Android, ukuba ekugqibeleni urhulumente waseMelika uyayohlwaya ngokudlula kwiibhloko zaseMelika eIran.
Iqela labaphangi be-PUBG babanjiwe e-China
I-Tencent, omnye wabaphuhlisi be-PUBG, wenza konke okusemandleni ukuba abahlaseli bathengise ukukopela ezibonelela ngemidlalo yomdlalo ukubona amathambo abo ejele.
INokia X iya kuboniswa ngoMeyi 16
AbakwaNokia bazokwazisa ngokusesikweni iNokia X ngoMeyi 16. Fumana ngakumbi malunga nefowuni yokuqala yophawu ukusebenzisa inotshi eya kuthi ifike kwiiveki ezimbalwa.
I-Telegram iye yehla iiyure eziliqela ngenxa yokufudumeza kwiiseva zayo
Iqonga lomyalezo weTelegram yayiyeyona nto kugxilwe kuyo kuhlaselo lwe-DDoS oluye lwabangela ukuba ezinye iiseva zalo zigqatse ubushushu.
I-Opera Touch, isikhangeli sewebhu esinokusebenza ngesandla esinye
I-Opera Touch yinkampani entsha yesikhangeli esiza kukuvumela ukuba ulawule yonke into ngesandla esinye. Okwangoku ifumaneka kuphela kwi-Android
IHuawei P20 kunye neHuawei P20 Lite Pink ngokukodwa e-El Corte Inglés
U-El Corte Inglés kunye noHuawei bajoyina imikhosi yokubonelela ngokukodwa ngeHuawei P20 Lite kunye neHuawei P20 epinki kubo bonke abathengi babo
Emva kweApple kunye ne-Twitter, ngoku nguGoogle oguqula i-emoji yompu
UGoogle ukhethe ukutsiba kwi-bandwagon yokuguqula ezinye i-emoticons, kwaye uguqule i-emoticon ye-pistol yompu wamanzi onendawo yokugcina eyakhelweyo.
Uhlaziyo olulandelayo lwe-iOS 12, kubonakala ngathi lubonisa, luya kuhambelana ne-iPhone 5s, i-terminal eya kuba kwintengiso kwiinyanga ezimbalwa.
Ngexesha le-MWC yokugqibela e-Barcelona, ​​inkampani yase-Korea yase-Korea yasungula i-AR Emoji ye-Samsung Galaxy S9 yayo entsha kunye neGPS ...
Isicelo se-eBay sisandula ukufumana umsebenzi omtsha osivumela ukuba sihlole ibhakhowudi yeemveliso esifuna ukuzithengisa kwaye sikwazi ukuzalisa ngokuzenzekelayo iinkcukacha zemveliso.
Abafana kwi-Epic kuye kwanyanzeleka ukuba baphelise enye yezinto ezintsha abazazise kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, emva kokubona indlela abasebenzisi abaziva bengakhuselekanga kolu hlobo lwesixhobo xa sisetyenziswa lutshaba.
Impelaveki ye-EBay yeSuper ibuyile ineetekhnoloji ezinkulu
I-eBay Super Weekend ibuyela kulwabiwo ngezaphulelo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-60 kwizixhobo zombane zazo zonke iimveliso
I-Sony Xperia XZ2 yeNkulumbuso, ikhamera ephindwe kabini ifikelela kwiifowuni zaseJapan
I-Sony Xperia XZ2 yeNkulumbuso siselfowuni esivela kwifemu yaseJapan esine-sensor ezimbini kwikhamera yangemva; I-chip ye-Snapdragon 845 kunye nomboniso we-4K
Imifanekiso ecociweyo yegolide ye-X X
I-iPhone X yegolide iye yavuza kwaye ngoku iqinisekiswe yiFCC. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-Apple enemifanekiso yokuqala esele iyinyani.
Ngaba sizamile i-WTF ?! Izitikha zeSmart, inkxaso ebambekayo enezixhobo ezininzi
WFT ?! Isitikha esiSmart, Sithetha ngenkxaso yokuncamathela ekulula ukuyisebenzisa ekuza kusivumela ukuba sithathe ezona zifanelekileyo kwaye sibeke iselfowuni kwisiseko ukuze sikwazi ukusebenzisa iiyure kunye neeyure zevidiyo.
IFirefox iyenza ukuba ikhusele umkhondo ngokungagqibekanga kuhlobo lwayo lwe-iOS
Uhlaziyo lwamva nje lweFirefox lwenza ukuba kulondolozwe umkhondo ngokungagqibekanga, ke siya kuhlala sikhuselwa kwizixhobo zokulandela umkhondo kumaphepha ewebhu esiwatyelelayo.
Idatha ye-LG V35 iyavela kwaye khange siyazise ngokusemthethweni i-LG G7
Ngelixa i-LG iqhubeka nokulungiselela umsitho wayo ngoMeyi olandelayo kwiNew York City, e ...
Abaphathi bephasiwedi abagqwesileyo
Ngaba ujonge oyena mphathi wegama eligqithisiweyo? Ngena kwaye ufumane okungcono okungama-5 ukugcina ipassword yakho ikhuselekile kwaye ihambelana phakathi kwezixhobo.
Izixhobo ze-Android ziyahambelana neFortite
Omnye wemidlalo yokutyhila, yezixhobo eziphathwayo, kwiinyanga ezi-4 ebesikuzo kulo nyaka ibiyi-Fortnite, ngaphandle ...
Hlonipha i-7C kunye neNhlonipho 7A eboniswe ngokusesikweni eSpain
Ngale mvakwemini iNew 7C kunye ne-7A entsha zinikezelwe eSpain, ezi zizixhobo ezitsha ezivela ...
I-ZTE Iceberg iya kuba nenotshi ephindwe kabini kwiscreen
Uyilo lweZTE Iceberg lubonisa inotshi ephindwe kabini kwiscreen. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo lwemodeli entsha yohlobo olothusayo ngokubheja kwinotshi ephindwe kabini.
I-LG G7 ThinQ iya kuziswa ngoMeyi 2 eNew York
Sele sinomhla oqinisekisiweyo wentetho esemthethweni yeflegi entsha ye-LG, ngoMeyi we-2 olandelayo ...
Ukucoca uyilo lweXiaomi's Black Shark ngaphambi kokunikezelwa kwayo
I-Xiaomi's Black Shark ivuza imifanekiso yayo yokuqala. Fumanisa ngakumbi malunga nomnxeba we-gamer wohlobo lwesiTshayina oluya kuthi lwenziwe ngokusemthethweni kwisithuba nje esingaphezulu kweveki kumnyhadala.
UXiaomi usiphelisa ngokupheleleyo isitokhwe seMi Mix 2s e China
Iindaba ezimnandi kwinkampani yaseTshayina ukuba emva kweveki apho bangenise khona isixhobo esitshintsha ...
Isamsung inokumilisela iGPS S9 kuhlobo oluncinci
Ngokutsho kokuvuza okutsha okuvela eTshayina, iSamsung inokumisela uhlobo oluncinci lweGPS S9 enokuthi ijolise kuphela kwintengiso yaseAsia.
ITyhilwe iNokia 9: Zonke izinto eziVuzisiweyo
Iphepha lobuchwephesha leflegi yakwaNokia elandelayo liye lavuza ngokupheleleyo: INokia 9. Inempawu zobuchwephesha ezinomtsalane ezingayi kushiya nabani na engashukumi.
Ukuncitshiswa kwe-100 euros kwixabiso leXiaomi Mi Mix 2
Ngaphandle kwamathandabuzo ukufika kwesigebenga samaTshayina kwilizwe lethu kuyimpumelelo yokwenene ngandlela zonke….
IXiaomi Mi MIX 2S, iflegi entsha yaseTshayina iboniswe ngokusesikweni
IXiaomi Mi MIX 2S yipablet evela kwinkampani yaseTshayina enobume obungenasiphelo; ngokutshaja ngaphandle kwamacingo; ikhamera yayo inenzwa kabini kwaye inenguqulo ye-Android yamva nje efakiweyo
I-Samsung Galaxy Note 9 inokuba nomfundi ofunda ngeminwe phantsi kwescreen
Amarhe amva nje acebisa ukuba i-Samsung Galaxy Note 9 iya kuba yeyokuqala kwinkampani ukubandakanya umfundi ofaka iminwe phantsi kwescreen
Le yeyona Samsung Galaxy J7 Prime 2 intsha
I-Samsung Galaxy J7 Prime 2 sele isemthethweni kwaye inkampani yaseMzantsi Korea ayenzi nto ...
Xela kwiscreen se-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + entsha
Kwiveki nje enye ukusungulwa kwayo kwintengiso, ezinye zeemodeli ezintsha zenkampani yaseMzantsi Korea i-Samsung ...
Ukucaciswa kwe-OnePlus 6 kuvuza
Xa ukumiliselwa kwe-OnePlus 3 kusekho iinyanga ezi-6 kude, eyona nto iphambili kwi-terminal ye-OnePlus iye yavuza.
I-Instragram iya kubonisa ukutya kwakhona kwakhona ngokulandelelana kwexesha
Ngexesha leshumi elinanye, okoko u-Facebook wathenga i-Instagram, ifoto yenethiwekhi yoluntu iya kutshintsha kwakhona i-algorithm yokondla, esivumele ukuba sibonise umxholo ngokulandelelana.
I-WhatsApp yeKaiOS, inkqubo yokusebenza ephethe iNokia 8810 entsha
Ngaba uyazi ukuba iNokia 8810 entsha isebenza phantsi kweKaiOS? Ngaba ucinga ukufumana enye? Ewe kongeza ezinye izibonelelo kuba kuya kubakho uguqulelo lweWhatsApp lweKaiOS
I-Huawei P20 Pro, iinkcukacha eziveziweyo kunye nekhamera kathathu enee-megapixels ezingama-40
Ngomhla we-27 ku-Matshi siqeshwe neHuawei. Iflegi yayo elandelayo iya kuziswa kumsitho ocwangcisiweyo: IHuawei P20 Pro
I-HTC isungula ngezixhobo ezitsha: i-HTC Desire 12 kunye ne-Desire 12+
Ukuya kwethu kwi-MWC kulo nyaka sibuze abanye babantu abaphetheyo ukuba bakhona into abayaziyo ...
I-bugs ze-IOS 11 zivela nkqu nakwizibhengezo zenkampani
Ividiyo yakutshanje yeApple isibonisa kwakhona ukuba nokuba iApple ngokwayo khange ikwazi ukusombulula ibug kwi-iOS 11 xa ibhala ingxelo yayo yamva nje.
Sivavanya ngokucokisekileyo ividiyo ebonisa ukuba kufanele ukuba yi-iPhone SE 2
Kwaye besithetha ixesha elide kwaye sibona amarhe malunga nokuba kunokwenzeka ukuba iApple izise imodeli entsha ye ...
Nge-mophie Powerstation ye-USB-C XXL sinokuhlawulisa ukuya kwi-MacBook Pro kunye nezinye izixhobo
Enkosi kwi-19.500 mAh ibhetri yangaphandle evela kumophie, sinokubiza ilaptop yethu, okanye iMacBook ngokukhawuleza, ngokulula nangaphandle kweeplagi.
Uyazi njani ukuba ingakanani idatha ehambayo yesicelo ngasinye
Ngaba ukhathazekile malunga nenkcitho yedatha eyenziwe ziisoftware zakho? Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zingaphi izicelo zedatha ezinje ngeSpotify, iNetflix, iYouTube, iFacebook okanye abanye abayisebenzisayo? Ngena kwaye ufumane indlela yokwazi ukusetyenziswa kwedatha yenkqubo nganye kwi-smartphone yakho.
Inkampani egxile ekuthengiseni iiBlackBerry eyenzelwe ulwaphulo-mthetho olulungelelanisiweyo iyavala
Inkampani i-Phantom Secure, yayijongene nokuguqula iBlackBerry ukuze zibe zizixhobo ezingafumanekiyo zombini kwindawo kunye neencoko ezazisenziwa ngezicelo ezenzelwe le njongo.
UApple uzama kwakhona ngemagazini yedijithali
Abafana abavela eCupertino baye kuthenga kwaye bathenga inkonzo yokubhaliselwa yamaphephancwadi iTexture, esinika umrhumo kumaphephancwadi angaphezu kwama-200 nge $ 9,99 nje.
I-WhatsApp yandisa ixesha lokucima imiyalezo ethunyelweyo
Abafana abasuka kuFacebook bandise elona xesha liphezulu ukuze bakwazi ukucima imiyalezo ebesikhe sayithumela ngaphezulu kweyure.
Le yindlela esebenza ngayo ikhamera yokuvula evulekileyo yeGPS S9 kunye ne-S9 +
Abafana abavela kwi-iFixit bahlalutye ukusebenza kwekhamera yokuvula emibini ye-Galaxy S9, ukusibonisa ukuba yenziwe njani kwaye isebenza njani.
UXiaomi uza kuvula ivenkile entsha eSpain ngoMatshi 17
IXiaomi ineevenkile ezi-3 eSpain: ezimbini eMadrid enye kwiBarcelona. Nangona kunjalo, baya kuvula entsha ngo-Matshi 17
I-Android P kukuphela koluhlu lweNexus
Inguqulelo elandelayo ye-Android, i-Android P, ayizukuhambelana neemodeli zamva nje kuluhlu lweNexus okanye ithebhulethi kaGoogle yePixel C.
I-Samsung Galaxy Note 9 sele ivele kwinethiwekhi
Namhlanje iimodeli ezintsha zenkampani yaseMzantsi Korea zisungulwe kwintengiso eAmazon, kwaye, e ...
Ezi zezona zinto ziphambili zintsha eziza kuvela kwisandla se-Android P
Abafana abasuka kuGoogle ekugqibeleni baveze ukuba iyakuba yintoni na inguqulelo elandelayo yenkqubo yokusebenza kwezixhobo eziphathwayo ezilawulwa yi-Android, ebizwa ngokuba yi-Android P
UkuKhanya kweFowuni 2: Eyona ilula yeNkcubeko yeFowuni yeHlabathi
UkuKhanya kweFowuni 2: Eyona smartphone ilula emhlabeni. Fumana ngakumbi malunga nale fowuni ebhengezwayo njengeyona ilula emhlabeni kunye neempawu zayo.
Ezi zezona zihamba phambili eziphakathi ezifumanekayo emva kweMWC
Iitheminali ezijikeleze i-euro ezingama-300 eziye zaziswa ngexesha leNkomfa yeHlabathi yeFowuni ka-2018 kwaye oko kuya kubonakala kunomtsalane kakhulu
IVodafone iphambi kweHuawei kwaye inikezela ngeHuawei P20 Lite entsha. Ixabiso kunye namaxabiso afakiwe
Kwaye ngaba namhlanje asinakuphoswa lithuba lokwazi isixhobo kwintsuku ngaphambi kwaso ...
Intsha entsha ye-Samsung S9 kunye ne-S9 Plus, unxibelelwano lokuqala ukusukela kwi-MWC
Ngaphandle kwamathandabuzo, lo nyaka yenye yezona zinqatyiswe kakhulu kukunikwa kweefowuni ezinkulu zeefowuni ...
I-ASUS iyothusa ngodidi lwayo lwe-ASUS ZenFone 5 kwi-MWC 2018
Kubonakala ngathi i-ASUS yayilinde yonke into ukuba iphumle kwisakhelo seNkomfa yeHlabathi yeFowuni ...
I-Vivo APEX, iselfowuni enekhamera ebalekayo nayo yonke isikrini
IVivo ikhona kwi-MWC kwaye yenza njalo nge-smartphone prototype ebambe bonke abantu abazimeleyo. Igama lakhe nguVivo APEX
Ukubheja kweNubia kwimidlalo kwii-smartphones kwaye savavanya ii-Z17s kwi-MWC
Ifemu yaseTshayina icace gca malunga nento eyifunayo kwikamva elikufutshane kuluhlu lwee-smartphones kwaye ...
I-Wiko iveza ii-smartphones zayo ezintsha kwi-MWC, iinkwenkwezi zijonga i-2 kunye ne-View 2 Pro
Inkampani yaseFrance iyaqhubeka ukongeza kwaye kulo nyaka izixhobo ezisibhozo zisungulwe kumnyhadala oseBarcelona, ​​ngo ...
I-Sony Xperia XZ2 kunye ne-XZ2 Compact, sele zinikezelwe ngokusemthethweni
USony akakhange athathe thuba lide ukubonisa izixhobo zakhe nje xa iimodeli ezintsha ze ...
I-Galaxy S9 ngoku isemthethweni: amaxabiso kunye neempawu
Emva kweenyanga ezininzi, amarhe kunye nabanye, amaKorea aseSamsung ekugqibeleni anikezele ngokusesikweni iflegi entsha yenkampani esikubonisa kuyo yonke inkcazo, amanqaku kunye namaxabiso
I-LG V30S ThinQ, iselfowuni ekrelekrele apho izinikele ngamandla kwi-Artificial Intelligence
I-LG V30S ThinQ siselfowuni enkulu esebenzisa ubukrelekrele bokwenza izinto ukuzehlulahlula kukhuphiswano
IHuawei P20 Plus inokongeza "Inotshi" kunye nesenzi sokubonisa iminwe phantsi kwesikrini?
Okokugqibela kokuvuza okuvela kumnatha xa kushiyeke usuku oluncinci ukubona iindaba ze ...
I-Sony Xperia XZ2 kunye ne-XZ2 Compact ihluziwe
Ukuvuza kuvelisa imveliso yokugqibela uSony aza kuyizisa kuthi kwi-Mobile World Congress oku ...
Iprototype evuzayo yeHuawei P20 ibonisa iinkcukacha ezibalulekileyo malunga nekhamera yayo
Sele siyazi ukuba ifemu ayizukuveza zintsha okanye endaweni yoko izixhobo zeflegi zenkampani ...
I-LG K8 kunye ne-LG K10 inguqulelo ka-2018, ii-mobiles ezintsha ze-LG ezimele ikhamera yazo
I-LG K8 kunye ne-LG K10 ka-2018 zizinga lokungena ngenqanaba elinemisebenzi eyongezelelweyo kwiikhamera zazo. Zombini iimodeli ziphucula amava omsebenzisi kwaye zisekwe kwi-Android
Iselfowuni yam ibiwe.Ndifanele ndenze ntoni?
Ukuba ngelishwa iselfowuni yakho ilahlekile okanye ibiwe kwaye awazi ukuba wenze ntoni ukuyifumana kwakhona, siza kukubonisa ukuba singaqhubeka njani ukuzama ukuyifumana kwakhona okanye siyivimbe ngokupheleleyo.
Ikhibhodi eyaziwayo ye-Swype yee-smartphones ayisayi kuphinda ihlaziywe
Ikhibhodi edumileyo yeSwype ayisayi kuphinda ifumane uhlaziyo kwaye abaphuhlisi bayisusile kwiivenkile zesicelo seApple noGoogle.
I-Chuletator kunye nezinye iindlela zokwenza i-cutlets
Umntu akahlali ngoChuletator yedwa. Kule nqaku sikubonisa ezinye iindlela ezizezinye esinokuzifumana kwi-Intanethi ukwenza iichops eziya kusinceda siphumelele iimviwo ngaphandle kokufunda.
Ukungathathi hlangothi konke konke kukusola ngokunyamalala kweWikipedia Zero, inguqulelo yeWikipedia ngaphandle kwedatha yeselfowuni
Inkonzo yeWikipedia Zero, neyasungulwa kwiminyaka emi-6 eyadlulayo, yokwenza ukuba ulwazi lufumaneke kwiqonga leWikipedia lifumaneke kuye wonke umntu, iyeka ukusebenza.
Iingcali ezincomela i-Messenger yabantwana zaxhaswa yi-Facebook
Ngokwentetho yeWired, iingcebiso ezilungileyo ezifunyenwe sisicelo seMessenger Kids kwezinye iingcali kunye nemibutho zithengiwe yinkampani kaMark Zuckerberg.
Isamsung ipapasha iividiyo zokuqala zeGPS S9 ibonisa ukuba iyakusivumela ukuba senze ntoni
Isamsung ithumele iphepha layo le-YouTube iividiyo ezintathu apho ijonga khona ezinye zeempawu esiya kuthi sizifumane kwi-s9 entsha kunye ne-S9 +
Ukucaciswa kweXiaomi Mi Mix 2s kuhluziwe, umgqatswa oza kuba kwi-MWC 2018
Kungenzeka ukuba kuhlelo olulandelayo lwe-MWC iqela elitsha leXiaomi liza kuvela, iXiaomi Mi Mix 2S. Iqela elinangaphambili elinescreen kuphela.
Ungayiseta njani i-smartphone ye-Android ukuba ibaleke ngokukhawuleza
Ukuba i-smartphone yethu ye-Android iqalile ukuhamba kancinci kunesiqhelo, sinokukhetha ukusebenzisa eli qhinga lincinci eliya kukhawulezisa utshintsho olunika imvakalelo yesantya ebesingenaso emva kohlaziyo lokugqibela.
I-Doogee esebenza nge-sensor yeminwe phantsi kwesikrini
Kuninzi okutshiwo malunga nokufika kolu hlobo lwenzwa ezibekwe ezantsi kwesikrini ...
I-BQ ilungiselela i-MWC yalo nyaka nge-bq entsha ye-Aquaris VS kunye ne-bq Aquaris VS Plus
Kwaye sonke sijonge ngase-Barcelona ngokufika kwezixhobo ezitsha kwaye i-BQ yenye ye ...
Ezinye iinkcukacha zeHuawei P20 Lite ezisikhumbuza nge-iPhone X
Akukacaci ncam ukuba inkampani yaseTshayina iyakuyipapasha inkcazo yeflegi entsha ...
Hlonipha umhlaba we-9 Lite eSpain ngexabiso elifanelekileyo kunye nezipho
Imbeko sele inesiphelo sayo sokugqibela esithengiswayo eSpain. Le yi-Honor 9 Lite, iqela elibuyekezwe kakuhle ngexabiso elinomdla
I-OnePlus 5T ngombala obomvu sele ikhona eSpain
I-OnePlus 5T kwiLava Red iyafumaneka ngoku. Fumana okunye malunga nale nguqulo ikhethekileyo yefowuni efika ngexesha loMhla weValentine.
Yile nto iRazer Ifowuni yeGolide yoHlelo ijongeka ngayo
Ngesizathu sokubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina, umenzi uRazer usungule uhlelo olukhethekileyo lweRazer Ifowuni, uhlelo olusibonisa uphawu lwayo lwangasemva kwigolide.
Ukucaciswa kunye nemifanekiso yokuqala yeNokia 7 Plus iyahluzwa
Kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokunikezelwa ngokusemthethweni kweNokia 7 Plus, uninzi lweenkcukacha zesiphelo esitsha sefemu yaseFinland sele zivuziwe.